Fandraharahana : nasehon’ny tsy miankina ny olany | NewsMada
Fandraharahana : nasehon’ny tsy miankina ny olany
Noresahina nandritra ny fihaonan’ny filoham-pirenena sy ny mpandraharaha ny olana mianjady amin’ny sehatra tsy miankina, ny 19 desambra teo. Anisan’izany, ny fanonerana ny TVA, ny famindram-bola, ny sakana amin’ny fahazoan- dalana hitrandraka harena an-kibon’ny tany, ny fepetra tokony horaisina manoloana ny tsy fandrosoan’ny fizahantany, sns.
Nivoitra koa ny firongatry ny kolikoly, ka andrasana ny vokatra azo tsapain-tanana avy amin’ilay Rafi-pitsarana miady amin’ny kolikoly (Pac). Noresahana ny olan’ny angovo sy ny herinaratra, izay tsiahivina fa hiakatra 10% ho an’ny orinasa. Mikasika ny fakan-ketra tsy ara-drariny sady atao amboletra, hapetraka ny rafitra hanara-maso manokana. Andrasana ny fankatoavan’ny filoham-pirenena ny lalàna vaovao mifehy ny fampiroboroboana indostria (LDI), novolavolain’ny vovonana fifampidinihin’ny fanjakana sy ny tsy miankina (DPP). Voasoratra ao anatin’io lalàna io ny fanomezana vahana ny indostria eto an-toerana, manoloana ny avy any ivelany, amin’ny alalan’ny Antokon-draharaham-pirenena hampiroboroboana ny indostria (ANDI) sy ny Tahirim-pirenena hampandrosoana ny indostria (FNDI). Hanome tombondahiny amin’ny hetra ny orinasa eto an-toerana ny LDI, toy ny fampihenana ny hetra amin’ny fampiasam-bola, ny fampiroboroboana ny fampiofanana ho an’ny indostria sy ny orinasa ara-dalàna.
Nilaza ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Tazafy Armand, fa mifanaraka amin’ny fijerin’ny tsy miankina ny voasoratra ao anatin’ny Tetibola 2018. Hitarina any amin’ny faritra koa ity fifampidinihan’ny roa tonta ity.